I-iPhone 13 nayo yonke into i-Apple eyivezileyo kwi-Keynote yayo | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | | I zi ganeko, ngokubanzi
Inkampani yaseCupertino ibone kufanelekile ukubhiyozela #AppleEvent Qho ngonyaka apho isibonisa iflegi yayo ngokwefowuni ephathekayo, i-iPhone. Ngesi sihlandlo, uluhlu lwe-iPhone 13 lubonisiwe ngezinto ezininzi ezintsha, kodwa alizizi lodwa.
Ukongeza kwi-iPhone 13, u-Apple wazise i-Apple Watch Series 7 kunye ne-AirPods yesithathu, masiqwalasele zonke iimveliso zabo. Masazise ngakumbi nzulu ngezixhobo iApple enqwenela ukulawula kuzo kwimakethi kulo nyaka ka-2021 kwaye uninzi lonyaka ka-2022, ngaba ezi mveliso ziya kuba nezinto ezintsha ngokwaneleyo?
1 I-iPhone 13 kunye nazo zonke izinto ezahlukileyo
2 Uthotho lweApple 7, olona tshintsho lukhulu
3 IPad Mini entsha kunye nokuhlaziywa kwe-iPad 10.2
I-iPhone 13 kunye nazo zonke izinto ezahlukileyo
Masiqale kuqala ngale iPhone 13 nazo zonke ezo zinto baya kwabelana ngazo. Eyokuqala yiprosesa eyaziwayo ye-A15 Bionic, le processor ezinikeleyo yenziwe yiTSMC Ijolise ekubeni yeyona inamandla kwimarike ngenxa yetekhnoloji ye-GPU edibeneyo kunye namandla aluhlaza. Ngokwenxalenye yayo, zonke izixhobo ziya kuba nezinto ezintsha Ubuso be-ID ye-2.0 kunye nenotshi eyenzelwe ubungakanani ukuya kuthi ga kwi-20% encinci ukwenza ukusetyenziswa ngcono kwendawo kunye nokunikezela ngokhuseleko olukhulu xa uvula ubuso, into efunwe kakhulu ngabasebenzisi, isithethi sidityaniswa kumda ophezulu wesikrini.
Kwelinye icala, ngoku zonke ii-iPhones ziya kuba nentlawulo efanayo ye-18W ngekhebula kunye ne-15W ngeMagSafe, Kunye nokudityaniswa kuyilo ngokutsha lweemveliso IMagSafe, ukuhambelana nohlobo lwangaphambili lweshaja engenazingcingo u-Apple ayenze yathandeka. Ngokufanayo, ngokubhekisele kunxibelelwano olungenazingcingo U-Apple uthathe isigqibo sokubheja kwinethiwekhi ye-WiFi 6E, indaleko encinci yenethiwekhi eyaziwayo yeWiFi 6, ukuphucula uzinzo kunye nokuhanjiswa kwedatha, ngaloo ndlela zibeka njengesixhobo esiphambili ngokobu buchwephesha.
Ngezizathu ezicacileyo, Ukubheja kweApple kwiipaneli ze-OLED kuzo zonke izixhobo zayo, kwimeko ye-iPhone 13 Mini iyakuba zii-intshi ezi-5,4, ezisuka kwii-intshi eziyi-6,1 ze-iPhone 13 kunye ne-iPhone 13 Pro kwaye inyuke iye kwii-intshi ezi-6,7 kuhlelo lwePro Max ye-iPhone 13. Njengobalaseleyo Iimbonakalo, i-iPhone kuluhlu lwayo lwePro iya kuba nenqanaba lokuhlaziya eli-120 Hz, Olunye lweempawu ezifunwa kakhulu ngabasebenzisi kule minyaka idlulileyo.
Ewe amandla okugcina ukusetyenziswa kwe-128 GB njengomgangatho ofika ngokuqinisekileyo.
I-iPhone 13 / iMini: 128/256/512
I-iPhone 13 Pro / iMax: 128/256/512 / 1TB
Kuyafana neebhetri, ukubheja kweApple awona mandla aphezulu owasebenzisileyo ukuza kuthi ga ngoku, ewe, ayizukubonelela ngetshaja efakwe kwibhokisi ye-iPhone.
I-iPhone 13 Mini: 2.406 mAh
I-iPhone 13: 3.100 mAh
I-iPhone 13 Pro Max: 4.352 mAh
Ngokukodwa sinotshintsho kwikhamera ephambili eyiyo I-Angle ebanzi ine-MP eyi-12 ene-f / 1.6 kunye nenkqubo yozinzo lomfanekiso ohamba phambili (OIS). Inzwa yesibini yi I-12 MP ye-Ultra Wide Angle ukuba kule meko inakho ukubamba ukukhanya okungaphezulu ngama-20% kunenguqulo yangaphambili yekhamera kwaye inesithuba f / 2.4. Konke oku kuyakusivumela ukuba sirekhode kwi-4K Dolby Vision, kwi-HD epheleleyo ukuya kuthi ga kwi-FPS ezingama-240 kwaye sisebenzise imo ye "cinematic" eyongeza isiphumo iimvakatjhi ngesoftware, kodwa irekhoda kuphela ukuya kwii-FPS ezingama-30.
I-iPhone 13 / iMini: Isenzi esona siphezulu + seAlex Wide Angle
I-iPhone 13 Pro / iMax: Isivamvo esiphambili + se-Wide Wide Angle + Ithuba lokuphakamisa iTelephoto + ne-LiDAR
Ngamaxabiso phakathi kwe-709 kunye ne-1699 euro Kuxhomekeka kwisixhobo esikhethiweyo, zinokugcinwa ngoSeptemba 16, kunye nokuhanjiswa kokuqala okuqala ngoSeptemba 24.
Uthotho lweApple 7, olona tshintsho lukhulu
I-Apple Watch ibisoloko inoyilo olubonakalayo oluye lwatshintshwa lwaba yinto encinci kule minyaka idlulileyo, isenza umgangatho wophawu kunye nothotho lweendlela ezizibeke njengeflegi yeflegi. Nangona kunjalo, iApple ithathe isigqibo sokungahlaziyi uyilo lwe Uthotho lwe-Apple 7 ukukunika uluvo lokuqhubekeka nge-iPhone yakho efunwayo, i-iPad, kunye neMacBook. Le yindlela iApple ishiye amagophe eApple Watch inyanzelekile ukuba inikezele uyilo ngokufana nolo lweApple Watch Series 6, ikakhulu kwimeko, kuba isikrini ngoku sifikelela kugqithiso kwaye sinokubonwa macala, into abo basebenzisi bebekade befuna kwakudala.
Zimbalwa izinto ezikwinqanaba lobuchwephesha ngaphaya kweprosesa entsha kunye nokusebenza kokusebenza, izinto ezibalulekileyo ze-Apple Watch Series 6 zihlala, njenge-electrocardiogram kunye ne-altimeter. Kuninzi okwathethwayo malunga neqondo lobushushu lomzimba elingazange lifike ekugqibeleni. Uluhlu lwayo olutsha kunye nemibala eyahlukileyo ayiveli kwisandla sokuhlaziya kubungakanani, nangona imiphetho incitshisiwe ngama-40%, nangona siza kuba neenguqulelo zentsimbi, titanium kunye nealuminium. Ixabiso liza kuqala kuma-euro angama-429 ngawona maxwebhu asebenzayo kwaye siya kuqhubeka sineenguqulelo nge-LTE okanye eziya kuthi zikhawulelwe kunxibelelwano lwe-Bluetooth + WiFi ngokuxhomekeke kwiimfuno zomsebenzisi ngamnye. Ngeli xesha, iApple ayikhange inike ngqo imihla yokuqaliswa kwayo, baya kuyishiya iye kuwa.
IPad Mini entsha kunye nokuhlaziywa kwe-iPad 10.2
Kuqala kuza iMini Mini entsha ezuze njengelifa ukusebenza kwe-iPad yomoya, isikrini esise-edge kunye nemiphetho emincinci kunye neekona ezijikeleziweyo, ii-intshi ezingama-8,3 ​​ngaphandle kwe-ID yobuso edityanisiweyo, kunye ne-ID yokuCofa kwiqhosha lamandla. Kule Mini yePad Mini sine I-A15 entsha ye-Bionic, iprosesa eya kuthi ngendlela inyuke kwi-iPhone 13 kunye ne-13 Pro, kunye nonxibelelwano lwe5G lukhona kanye kwikhebula le-USB-C ukudibanisa izixhobo.
Ngokuphathelele i-iPad 10.2, igcina ixabiso layo kwaye ayenzi naluphi na uhlobo kwinqanaba loyilo, kodwa iya kuhlala ikhamera entsha ye-12MP FaceTime yekhamera ene-122º Wide Angle sensor kunye neprosesa ye-A13 Bionic ye-Apple.
Zonke ezi ziindaba ezivezwe yinkampani yaseCupertino ngexesha lomnyhadala namhlanje, iyafumaneka kungekudala kwiindawo eziphambili zentengiso nakwiVenkile ye-Apple ebonakalayo kunye ne-Intanethi, nangona unokwenza ugcino oluqhelekileyo. Kuyaziwa ukuba iApple ihlala ibonelela ngesitokhwe "esincinci" kwezi zixhobo ngomhla wazo wokuphehlelelwa, siyathemba ukuba asizukubona imigca eqhelekileyo kwiVenkile yeApple njengakwixesha langaphambi kwe-COVID.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-iPhone 13 nayo yonke into i-Apple eyibonisileyo kwi-Keynote yayo
U-Sonos ubhengeza i-Beam yesizukulwana sesibini, ixabiso lentsebenzo